Saafi Films - News: Netherlands: Nin Magangelyodoon ah oo dab is qabadsiiyay.
Netherlands: Nin Magangelyodoon ah oo dab is qabadsiiyay.
Nin Ciraaqi ah oo Magangelyo ka codsaday dalka Netherlands ayaa maanta isku gubay xarun kuwa magangelyodoonka ah oo ku taallo Gobolka Utrecht ee Bartamaha Dalka Netherlands kadib markii loo diiday magangelyadii uu cosaday.
Wakaalada wararka ANP oo xaqiijisay warkaan ayaa intaasi ku dartay in ninka dabka is qabadsiiyay loola cararay cispitaalka balse aanan laga siinin wax faafaahin ah oo intaasi ka badan.
Waxaa sidoo kale ay sheegtay in Ninkan oo u dhashay dalka Ciraq loo sheegay todobaadkii hore in la diiday codsigiisii sidaas darteedna ay tahay in dib loogu celiyo dalkiisa Ciraaq.
Dowlada Ciraq ayaa diiday in ay aqbasho Qoxootiga la diiday dacwadood ee ay tahay in dib loogu celiyo dalkooda hase ahaatee wasiir ku xigeenka arimaha qoxootiga Fred Teeven ayaa go,aamiyay in cadaadis lagu sooro sidii loo musaafurin lahaa magangelyodoonka la diiday codsiyadooda.
Bishii April ee sanadkii 2011, ayaa nin qoxooti ahaa oo u dhashay Dalka Iran uu u dhintay dab uu is qabadsiiyay kadib markii la diiday codsigiisii magangelyodoon.
4,495,645 unique visits